Ikhaya leSmart-iPandawill Technology Co, Ltd
Ukuzenzekelayo ekhaya kukwandiswa kwendawo yokuhlala ngokuzenzekelayo. Sisixhobo esizenzekelayo sekhaya, umsebenzi wasekhaya okanye owasekhaya. Ukuzenzekelayo ekhaya kungabandakanya ukulawulwa okuphakathi kokukhanya, i-HVAC (ukufudumeza, ukungena komoya kunye nomoya opholileyo), izixhobo zokusebenza, ukhuseleko kumasango neengcango kunye nezinye iinkqubo, ukubonelela ukuphucula okusebenzayo, intuthuzelo, ukusebenza kwamandla kunye nokhuseleko. Ukuzenzekelayo ekhaya kubantu abadala kunye nabakhubazekileyo kunokunika umgangatho wobomi owandileyo kubantu abanokuthi bafune abanonopheli okanye ukunakekelwa kweziko.
Ukuthandwa kwe-automation yasekhaya kuye kwanda kakhulu kule minyaka idlulileyo ngenxa yokufikeleleka okuphezulu kunye nokulula ngokuhambelana nokunxibelelana kwethebhulethi. Ingcamango ye "Intanethi yezinto" inxulumene ngokusondeleyo kunye nokwandiswa kwezinto ezizenzekelayo ekhaya.
Inkqubo yokuzenzekelayo yasekhaya idibanisa izixhobo zombane endlwini kunye nenye. Ubuchule obuqeshwe ekhaya oomatshini baquka abo bakwakha oomatshini abazisebenzisayo kunye nokulawulwa kwemisebenzi yasekhaya, enje ngeenkqubo zokuzonwabisa zasekhaya, ukutyala indlu kunye nokunkcenkceshela iyadi, ukondla izilwanyana, ukutshintsha indawo "yemiboniso" yeziganeko ezahlukeneyo (ezinje ngezidlo okanye amaqela) , kunye nokusetyenziswa kweerobhothi zasekhaya. Izixhobo zinokudityaniswa kuthungelwano lwasekhaya ukuvumela ulawulo ngekhompyuter yakho, kwaye zinokuvumela ukufikelela okukude kwi-intanethi. Ngokudityaniswa kwetekhnoloji yolwazi kunye nemeko yekhaya, iinkqubo kunye nezixhobo ziyakwazi ukunxibelelana ngendlela edibeneyo ekhokelela kuncedo, amandla okusebenza, kunye nezibonelelo zokhuseleko.